Indlu kwiLake Constance
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguSabine
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uSabine iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Indlu yethu entle enentsapho enye ikwindawo entle eluhlaza ezolileyo enendawo yokuhlala ezaliswe zizikhukula eziziimitha ezili-120. Ineebhalkhoni ezi-2, igadi enesihlalo phantsi kwemithi yeziqhamo kunye nesitya somlilo, indawo yokudlala yabantwana kunye nendlu yomthi. Isikhululo sebhasi, iposi kunye nevenkile yokutya kukuhamba nje imizuzu embalwa.
Indlu inamagumbi okulala ama-3, igumbi lokufundela elinokukhanya kwelanga kude kube ngokuhlwa, igumbi lokuhlala elikhulu / lokutyela, ikhitshi, indlu yangasese eyahlukileyo kunye negumbi lokuhlambela elinebhafu.
Ungafikelela ngokulula kuncedo lwezibuko laseFussach ngebhayisekile. Apho uya kufumana indawo yokutyela yeentlanzi egqwesileyo kunye nezinye iindawo. Izibonelelo ezisecaleni kwechibi eHard naseBregenz zinokufikelelwa ngokulula ngendlela yomjikelo ngokuthe ngqo echibini.
Ulondolozo lwendalo luqala kwiimitha ezimbalwa emva kwendlu. Ukuhamba ixesha elide kwindalo kunokwenzeka apha.
Isikhululo sebhasi, iposi kunye nevenkile yokutya kukuhamba nje imizuzu embalwa.
Umnyhadala weBregenz, iSiqithi saseLindau, idolophu yakudala yaseFeldkirch, uhambo oluya eSwitzerland kunye nehlathi laseBregenz.
Siyakuthanda ukuhamba. Njengesibini okanye nabantwana bethu aba-4. Sele siphonononge amazwe amaninzi kwaye safumana iindawo ezintle. Ngo-2018 siphumeze iphupha lethu kwaye sakha ikhaya leholide ngokuqinisekileyo yenye yezona ndawo zintle kuthi.
Siyakuthanda ukuhamba. Njengesibini okanye nabantwana bethu aba-4. Sele siphonononge amazwe amaninzi kwaye safumana iindawo ezintle. Ngo-2018 siphumeze iphupha lethu kwaye sakha ik…